सडक सुरक्षाका लागि एकजुट हुँदै- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
सडक सुरक्षाका लागि एकजुट हुँदै
काठमाडौँ — उपत्यकाका प्रमुखहरूले यातायात व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सँगैसँगै जानेगरी योजना बनाउनतर्फ लागेका छन् ।
उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख तथा उप-प्रमुखका साथै यातायात, ट्राफिक र नगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले आइतबार भेला भएर उपत्यकाका वातावरण, यातायात र सडक सुरक्षाका विषयमा छलफल गरे । बाहिरी चक्रपथका सम्बन्धमा गलत डिजाइनका कारण दुर्घटना बढेको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहरी योजना आयोगद्वारा आयोजित काठमाडौं उपत्यका अन्तरनगर कार्यशाला गोष्ठी तथा नगरप्रमुख सम्मेलनमा सहभागी उपत्यकाका मेयरले सडक सुरक्षा र वातावरणका सन्दर्भमा सँगै अघि बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । 'हामी यहाँ समाधान खोज्नका लागि बसेका हौं । समस्या समाधानका लागि महानगरले अगुवाइ लिएको हो,' काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, 'हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि छलफल गरेका हौं । आज सरोकारवालासँग सुझाव लियौं र उपायबारे विकल्प बुझ्यौं ।'
महानगरले जाम हटाउन 'पिक एन्ड ड्रप' लागू गर्दा सुरुमा आलोचना भए पनि अहिले सबैतिरबाट उक्त व्यवस्थाको माग भइरहेको उनको दाबी छ । उनले काठमाडौं महानगरपालिका मात्र नभई जाम हुने अन्य स्थानमा समेत लागू गर्न सकिने र त्यसका लागि काम भइरहेको जनाए । 'यातायात व्यवस्थापनमा एकीकृत रूपमा अघि बढ्नेछौं,' शाक्यले भने । उनले उपत्यकाका नदी सरसफाइका लागि पनि आगामी दिनमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सडक पैदलयात्रीमैत्री नभएको धारणा राखे । उनले उपत्यकाका सडकमा मापसे चेकिङ, पिक एन्ड ड्रप, हर्न निषेधजस्ता योजनाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गरे । चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले सडक सुरक्षाका निम्ति सीसीटीभी निकै उपयोगी साबित भइरहेको जनाए । 'हाम्रो नगरमा सीसीटीभीले ट्राफिक नियम मिच्नेलाई कारबाहीका साथै अन्य हिसाबले पनि उपयोगी देखिएको छ,' उनले भने ।
'प्राधिकरणको विकल्प छ’
उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार आइसकेको सन्दर्भमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
उनले यसका विकल्पका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न संशोधन गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा श्रेष्ठले त्यसको एक विकल्प नगरपालिका फोरम पनि हुन सक्ने धारणा राखे वा विकास निर्माणका कार्यमा अन्तर नगरपालिका समन्वयका लागि नगरपालिका परिषद् गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, 'प्राधिकरणको ८० प्रतिशत काम स्थानीय तहसँग बाझिन जान्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको १०६ धारामा हेर्ने हो भने नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग बाझिएका हकमा भएका संघसंगठनहरू खारेज गर्नुपर्छ, त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो ।' तर जिम्मेवारी भुल्दै प्राधिरकणलाई पुलपुल्याएर मलजल गरिएको उनले आरोप लगाए ।
फोरमका तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा यसका लागि लिखित आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ साथै विकास आयुक्तले व्यक्ति विशेषमाथि 'अन्ट सन्ट' बोल्दै हिँडेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:५३
आँखामा पनि क्यान्सर !
काठमाडौँ — राजधानीवासी एक बालिकाको जन्मेको सात दिनमै आँखाको नानीको भाग सेतो देखियो । आँखा रातो र रसिलो भइरहन्थ्यो । धेरै दिनसम्म समस्या हराएन । अस्पताल पुगेर परीक्षण गर्दासम्म लक्षणहरूले क्यान्सरको रूप लिइसकेको रहेछ ।
सामान्य समस्या सोचेर अस्पताल पुगेका बालिकाका बाबुले आँखाको पनि क्यान्सर हुन्छ भन्ने पत्याउन सकेनन्, आत्तिए मात्रै । चिकित्सकसँग परामर्शपछि उपचार थालियो । ६ पटक केमोथेरापी दिएपछि बालिका अहिले क्यान्सरमुक्त भइसकिन् ।
क्यान्सरमुक्त भए पनि उनको एउटा आँखा भने निकालिएको छ । चाँडै उपचार गरिएका कारण बालिकाको अर्को आँखा र ज्यान बचाउन सम्भव भएको उपचारमा संलग्न डा. बेन लिम्बू बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'अधिकांश बिरामी दुवै आँखा निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् । आँखाको क्यान्सरबारे जनचेतना नहुँदा बिरामी उपचार नगरी बसिरहेका छन् ।'
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २० हजार नवजात शिशुमध्ये १ मा यस्तो समस्या देखिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा यो रोग देखा पर्न सक्छ । समयमा उपचार हुन नसके क्यान्सर फैलिएर अन्धोपन हुन्छ । शरीरभरि रोग फैलिएर ज्यानै जान पनि सक्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा यो रोगबाट हुने मृत्युदर ७० प्रतिशत हुन्छ ।
विकसित मुलुकमा मृत्युदर १ प्रतिशत मात्रै छ । डा. लिम्बू भन्छन्, 'अशिक्षा, अन्धविश्वास, गरिबी र उपचार अभाव यसको प्रमुख कारण हो ।'
तिलगंगा आँखा अस्पतालका अनुसार अघिल्लो वर्ष ६० प्रतिशत यस्ता बिरामी आँखा निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल आइपुगेका थिए । अस्पतालकी आँखारोग विशेषज्ञ डा. रोहित सैजु भन्छन्, '२० वर्ष पहिले बिरामी आँखाको क्यान्सर फैलिएर बाहिर मासुको डल्लो निस्केको अवस्थामा आउँथे ।'
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:५३